accessiBe: Iji Amamịghe echiche Iji mee nnweta saịtị | Martech Zone
Ọ bụ ezie na iwu maka nnweta saịtị abanyela kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anaghị eme ngwa ngwa. Ekwetaghị m na ọ bụ ihe nke ọmịiko ma ọ bụ ọmịiko n'akụkụ nke ụlọ ọrụ… M kwere n'ezie na ụlọ ọrụ na-nanị mgba na-elu.
Ekwetaghị m na m bụ naanị ebe a… n'eziokwu, ọnụ ọgụgụ na-eju anya mgbe ị nyochara weebụ yana nnabata ụkpụrụ nnweta:
Ibilitynweta abụghị otu ihe, ọ bụ ngwakọta nke njirimara ihu njirimara njirimara na ozi ewepụtara:
Ngwa nyocha - ngwa nyocha nnweta websaịtị, ndị nyocha HTML, ndị nyocha CSS, ndị na-enye nzaghachi nye ụlọ ọrụ etu esi melite nnweta saịtị ahụ yana ụdị ogo gị bụ.
accessiBe awade a Ngwado Nkwado Litgba akwụkwọ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla, ma ọ bụrụ na agbagha nnabata websaịtị gị. Tinyere nlebara anya nke aka ha, ngwugwu a gunyere oditi ndi okacha-amara, akuko, ihe eji aka nweta, nnabata nkwado, nkwado na ndi ozo.